Umgca oxwesileyo wentengiso yeAdidas ekrelekrele | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Yintoni enokufikelelwa ukuskrolela nje umgca kwilogo ngamanye amaxesha kuyamangalisa. Yiyo le nto yenzekayo ngombono omkhulu owenziwe ngolu luvo kwintengiso yeAdidas.
Nguye Intengiso yeembadada zeAdidas, le ikati iyise emanzini ngokuba nale ngcinga intengiso, apho umgca othe tyaba utsalwa nje ukuze ulingane ngokugqibeleleyo nelogo yohlobo lwezihlangu zezemidlalo.
Le ndlela yoyilo nika ilogo yeAdidas ijije kwaye ekugqibeleni iye yalungela ukuba ibe yindawo ekubhekiswa kuyo kuhlobo lophawu, isebenza ngokugqibeleleyo ukwenza uhlengahlengiso olufana nolo lwenziweyo, kwaye olo lutsala umdla.
Imigca emithathu ye-oblique ibikhona Wongeze umgca othe tye ekuvumela ukuba uzobe ngokugqibeleleyo umbono weembadada zeAdidas. Kupholile kwaye kulula kangangokuba bubukrelekrele obumsulwa. Ke ikwasifundisa ukuba olu luvo lukrelekrele lunokujikeleza ikona ngomonde omncinci kwaye uluvumele "lupheke" ezingqondweni zethu nakwindlela yokuyila.
Okanye njengempazamo elula yeeleyisi okanye ukubetha kungakhokelela kuyo nika ezi zimvo zibalaseleyo. Ngubani onokuthi iimpazamo azenzanga indlela yazo. Kwaye ngelixa abanye beqhwabela izandla umgca othe tyaba, abanye bachaze ukuba inokuba sisikhephe, nangona ihlala ininzi ukuqonda ukuba ivela ngakumbi kumona.
Un I-logo ye-Adidas enike uphawu lwe-sneaker brand unokuba neziganeko zentsusa ngokuzoba umgca othe tyaba ngezantsi kwale migca mithathu yokuthambeka. Sathetha ngalo mbono kwiminyaka eyadlulayo yemivumbo emithathu kwaye inike okuninzi kolu phawu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Le ntengiso yengcinga yeAdidas iphantsi
U-Bayardo Rueda uSodolophu sitsho
Ukugqwesa, elula intle !!!
Phendula uBayardo Rueda Mayorga
Xa ubhala iiPaki zeSizwe eMelika ngohlolo lweenkwenkwezi ezi-1